Beddelaan US dollar In Oo shilin Soomaali
UN xogta heerka sarrifka ee 24/05/2022 12:15
US dollar In Oo shilin Soomaali beddelaad. US dollar qiimaha maanta ee Oo shilin Soomaali maanta suuqa sarrifka lacagta.
1 US dollar = 578.82 Oo shilin Soomaali
Isbeddelka sicirka sarrifka ee US dollar to Oo shilin Soomaali waxay dhacdaa hal jeer maalintii. Qiimaha sarrifka lacagaha ayaa leh celcelis ahaan qiime maalin kasta. Qiimaha sarrifka laga bilaabo US dollar to Oo shilin Soomaali oo laga soo qaatay keydka macluumaadka lagu kalsoon yahay. 1 US dollar waa 578.82 Oo shilin Soomaali. US dollar kor buu u kacaa. The US dollar sicirka doolarka Mareykanka ayaa kor u kacay Oo shilin Soomaali by 0 boqol meelood meel barta boqolleyda.
Heerka Sarrifka US dollar In Oo shilin Soomaali
Hal bil ka hor, US dollar waxaa lagu badali karaa 551.05 Oo shilin Soomaali. Sanad ka hor, US dollar waxaa laga iibsan karaa 588.09 Oo shilin Soomaali. Sadex sano ka hor, US dollar waxaa laga iibsan karaa 584.70 Oo shilin Soomaali. Toddobaadka gudihiisa, US dollar illaa Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka ayaa is beddelay 1.85%. 5.04% - isbeddelka heerka sarrifka ee US dollar to Oo shilin Soomaali bishii. -1.58% - isbeddelka heerka sarrifka ee US dollar to Oo shilin Soomaali sanadkii.
Heerka Sarrifka US dollar (USD) In Oo shilin Soomaali (SOS) Ku nool suuqa sarrifka Forex
Bedelaha lacagaha US dollar Oo shilin Soomaali
US dollar (USD) In Oo shilin Soomaali (SOS)
1 US dollar 578.82 Oo shilin Soomaali
5 US dollar 2 894.11 Oo shilin Soomaali
10 US dollar 5 788.22 Oo shilin Soomaali
25 US dollar 14 470.54 Oo shilin Soomaali
50 US dollar 28 941.09 Oo shilin Soomaali
100 US dollar 57 882.18 Oo shilin Soomaali
250 US dollar 144 705.45 Oo shilin Soomaali
500 US dollar 289 410.90 Oo shilin Soomaali
Beddelka lacagta maanta loogu talagalay 10 US dollar ayaa bixisa 5 788.22 Oo shilin Soomaali. Hadaad leedahay 14 470.54 Oo shilin Soomaali, ka dibna gudaha Soomaaliya waa lagu iibin karaa 25 US dollar. Maanta, 50 US dollar waxaa lagu iibin karaa 28 941.09 Oo shilin Soomaali. Beddelaadda Lacagta hadda 100 US dollar ayaa bixisa 57 882.18 Oo shilin Soomaali. Maanta, 144 705.45 Oo shilin Soomaali waa la isweydaarsadaa 250 US dollar. Beddelashada 500 US dollar qiimaha 289 410.90 Oo shilin Soomaali.
US dollar In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka
US dollar In Oo shilin Soomaali maanta 24 May 2022
24.05.2022 570.092465 24.683513 ↑
23.05.2022 545.408952 -8.786127 ↓
22.05.2022 554.19508 -33.098564 ↓
21.05.2022 587.293644 5.37721 ↑
20.05.2022 581.916433 8.60102 ↑
24 May 2022, 1 US dollar = 570.092465 Oo shilin Soomaali. 23 May 2022, 1 US dollar = 545.408952 Oo shilin Soomaali. US dollar to Oo shilin Soomaali dusheeda 22 May 2022 waa u siman yahay 554.19508 Oo shilin Soomaali. Ugu badnaan USD / Heerka SOS heerka bishii ugu dambeysay ayaa ahaa 21.05.2022. Ugu yar US dollar to Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka bishii ugu dambeysay ayaa ahayd 23.05.2022.
US dollar In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka
US dollar iyo Oo shilin Soomaali calaamadaha lacagta iyo waddamada
US dollar calaamadda lacagta, US dollar calaamad lacag: $. US dollar Gobolka: British Virgin Islands, iyo Territory British Badweynta Hindiya, East Timor, Islands Marshall, Micronesia, Palau, ee Islands Northern Mariana, USA, ee Turkiga iyo Caicos Islands, Ecuador. US dollar lacagta code USD. US dollar Qadaadiic: boqolkiiba.